Hydraulic karama jack na-emepụta ihe, Porta Power Jack Resuers | Jack jack
Ulo > Ngwaahịa > Hydraulic karama
A na-edeghachi Jack Jack dị ka otu n'ime ndị na-ebubata Porta Pocer Portar Jack Jack Jack Jack dị mma ngwaahịa na arụmọrụ pụrụ iche na izi ezi. Ngwaahịa anyị na-eme ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ site na ọtụtụ afọ, anyị ebuliwo akụrụngwa na ikike nke ndị njikwa, ndị injinia yana teknụzụ. Akụkụ dị ogologo na akụkụ dị anya nke Jack Power Jack anyị bụ ndị kwesịrị ịdị mma ma nwee ekele maka mpaghara dị iche iche ahịa. A na-eji ngwaahịa anyị niile dabara adaba maka ndị ahịa n'ihi na Jacan ike anyị enyere anyị na-enye anyị iji mejuo ihe dị iche iche nke ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ahụ na ọnụ ahịa ọrụ anyị pere mpe.